Etazonia: Al Jazira, voasivana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2018 13:31 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, 繁體中文, 简体中文, Italiano, English
Tamin'ny 2005 , rehefa nizara ny fikasany hanangana fantsona amin'ny teny anglisy ny Al Jazira, sady nahazo fanohanana no hetsika fanoherana tany Etazonia ny fanambaràny. Ary koa, na dia tsy nanakana ny fandefasana ilay fantsona aza ny fanjakana amerikana, betsaka ireo mpandefa fahitalavitra amin'ny hosona no nisalasala tamin'ny fandefasana azy; satria, na i Donald Rumsfeld aza dia niampanga ilay fantsona ho ”fitaomana amin'ny fampihorohoroana”. Etsy an-daniny kosa, sehatrana fifaninanana ”bande passante” ny tsena amerikàna ho an'ny fahitalavitra amin'ny tariby, ary tsy manana fahafahana hanome ny fantsona rehetra.
Noho izany, nijanona ho tsy azo nojerena tao Etazonia ilay fantsona. Mba hahazoana ny Al Jazira tany amin'ny faritra maro, mila mandoa hatramin'ny 45 dolara isam-bolana ireo Amerikana, ankoatra ny famandrihana nataony (tamin'ny tambajotra DishTV), izay tena lafo be ho an'ny ankamaroan'izy ireo.
Na izany aza, tsy ela akory, ny Burlington Telecom, fananan'ny kaominina kelin'i Burlington (mponina 39 000), tao amin'ny Vermont, no nanapa-kevitra ny hanolotra ny Al Jazira amin'ny teny anglisy, izay niteraka adihevitra teny anivon'ireo mponina, ka nitakian'ny vondrona sasany ny fampijanonana ny fandefasana azy mihitsy aza. Nandray ilay lohahevitra ny blaogera sasany, tao an-tanàna sy erantany. Will, ao amin'ny KABOBfest (Palestina/Etazonia) dia manolotra ilay adihevitra ary mamarana hoe :
Arakaraky ny hanakaikezantsika ny faran'ny fitondran'i Bush, dia tokony hazava amin'ny rehetra fa ilay fisainana antitra, ”isika no olon-tsara, izy ireo no ratsy saina”, dia mitondra mankany amin'ny tsy fahombiazana sy vokany mandravarava. Fotoana izao tokony hanombohan'ny Amerikana ny fifanakalozana hevitra amin'izao tontolo izao sy ny fihainoana ireo tsy avy ao Etazonia. Ny Al Jazira amin'ny teny anglisy, tena izany mihitsy. Tena liam-pivoarana i Burlington, fa ity adihevitra ity dia tokony hisokatra isaky ny kaominina manerana ny firenena, ary ny ankamaroany dia tsy mahazo ny Al Jazira amin'ny teny anglisy.
Mbola ao amin'ny KABOBfest ihany, tao amin'ny aterineto, mamoaka tatitra an-dahatsarin'ny Al Jazira amin'ny teny anglisy izay manolotra ity raharaha ity [amin'ny fomba matihanina sy mifandanja] i Hanaan, ary manampy izy [amin'ny fomba somary tsy rariny, manaporofo izany ilay tatitra ]:
Na eo aza ny lazany amin'ny maha-misoka-tsaina azy, dia mbola misy dondrom-belona ao Burlington, izay ny eo ambonin'ny lohany dia ny Israel Center of Vermont sy ny Defenders Council of Vermont.
Avy any Burlington mihitsy, taratasy roa avy amin'ny mpamaky no tanisain'ny blaogy Second Opinion avy amin'ny Burlington Free Press. Ny voalohany, Scott Baker, dia mihevitra fa mitovy amin'ny fanasivanana ny fanalàna ny Al Jazira ao amin'ny fehezana Burlington Telecom:
Ampahany amin'ilay olana misy amin'ny fifandraisana eo amin'i Etazonia sy ny Afovoany-Atsinanana dia ny tsy dia fifankafahantaran'ny mponin'ny andanny sy ny ankilany. Voafaritry ny politikan'ny fanjakantsika ny fifandraisantsika, fa tsy avy amin'ny fifaneraserana malalaka sy fahafantarana ny tsy fitoviana fomba fijery. Mazava ho azy, miresaka momba ny Al Qaïda ny Al Jazira, satria dia olana goavana ao amin'ny faritra iavian'ity fantsona ity izany. Na izany aza, raha mamaky sy mihaino betsaka isika, ny ankamaroan'ny Arabo sy ny Silamo dia tezitra ihany koa amin'ny Al Qaïda avokoa toy ny ankamaroan'ny Amerikana.
Ao anatin'izany lahatsoratra izany ihany, mitsikera ny safidin'i Burlington Telecom handefa ny Al Jazira amin'ny teny anglisy i Steve Flemer:
Raha ny fahazoako azy dia toa tsy maintsy nanome safidina fantsona fahitalavitra maro an-tariby izay tsy hamela fahatsapana fa mila maka toerana ara-politika mety hivadika aminy ity sampan-draharaha monosipaly tanora ity, izay efa miatrika famandrihana ambany noho ny tombana natao.
Ao amin'ny tranonkalan'ny Seven Days, gazety eo an-toerana, mamintina tsara ilay raharaha ny fanehoankevitry ny mpamaky iray:
Adinoy any ny adihevitra misy eo amin'ny mpandala ny nentindrazana sy ny liberaly. Ny tena adihevitra mikasika ny Al Jazira ao Burlington sy any amin'ny toeran-kafa dia mihalasa ho adihevitra eo amin'ireo nijery ity fantsona ity sy ireo tsy nijery izany. Ireo nijery ny Al Jazira dia hisintona tombontsoa amin'ny fanadihadihany ankapobeny mavesa-danja momba ny tranga iraisam-pirenena. Etsy an-daniny kosa, ny ankamaroan'ireo maniry ny hanajanonana ny fandefasana ny Al Jazira dia tsy mbola nijery izany mihitsy. Na dia havelantsika aza ny hoe tsy tokony ho avelantsika hisy ampahan'ny vahoaka hanao tsindry hazo lena amin'ilay ampahany iray hafa, mora ny mamaly ny fanontaniana hoe iza amin'ireo fomba fijery ireo no azo itokiana kokoa.
Amerika Latina 3 herinandro izay